Lagu kalsoon yahay oo aan la bedeli karin Archives - Injiilka oo ku qoran af-soomaali
Waxa aan leeyahay saxiibo fara badan oo Muslimiin ah. Waayo aniguba waxa aan ahay qof Ilaahay (Swt) yaqaana oo rumeysan, waxa anaan amiinsanahay Injiilka. Waxa… Read More »Kitaabka Injiilka miya la badaley? Muxuu Quraanka Karimka ah ka Leeyahay ariinkaas?
Qoraalkaygii hore waxa aan eegay waxa uu Quraanka ka leeyahay waxaygii Tawreed, Sabuur iyo Injiilka ee hada loo yaqaan Kitaabka Quduuska ah. Waxa aan dareemay… Read More »Waa la badalay Injilka! Maxuu Sunnaha uu ariinkas ka qaba?
Xataa haddii aan aqoonsanahay in Quraanka iyo Sunnaha labada xaqiijinayaan in Kitaabka ( Tawreed , Injiil iyo Zabur uu ka samaysan yahay al Kitab )… Read More »Quran ka ayaa badalay Kitaabka Quduuska ah! Maxu Quraanku ka leyahay arinkaas?